Farmaajo oo ka horyimid go’aankii Rooble uu dalka kaga eryay Danjire Francisco Madeira – XAMAR POST
Farmaajo oo ka horyimid go’aankii Rooble uu dalka kaga eryay Danjire Francisco Madeira
By Mohamed Abdi On Apr 7, 2022
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo saaray qoraal uu kaga soo horjeestay warka kasoo baxay Ra’iisul Wasaaraha XFS Maxamed Xuseen Rooble kaas oo uu dalka kaga eryay Wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya Danjire Francisco Madeira.
Ugu horreyn Madaxweyne Farmaajo ahaa bogaadiyay dawrka nabad ilaalinta ee Midowga Afrika iyo qeybta libaax oo ay ka soo qaateen dowlad dhisidda Soomaaliya iyo la dagaalka Kooxaha Al-shabaab iyo Daacish.
Sidoo kale, qoraalka ayaa lagu xusay in Wakiilka Gaarka ah ee Midowga Afrika ee Soomaaliya Danjire Francisco Caetano Madeira iyo danjireyaasha kale ee caalamka uu warqadaha aqoonsiga Danjirenimo ka guddooma Madaxweynaha Jamhuuriyadda oo ah ilaaliyaha madaxbannaanida dalka.
“Go’aan kasta oo taabanaya xiriirka aan dunida la leenahay iyo joogitaanka Safiirada shisheeye ee dalka waa mid saameynaya iskaashiga aanu la leenahay caalamka, waana tallaabo u baahan in lagu saleeyo danta qaranka, kuna timaadda wadatashi.”qoraalka kasoo baxay Xafiiska Madaxweyne Farmaajo ayaa sidaa lagu yiri.
Sidoo kale, Madaxweyne Farmaajo ayaa qoraalkiisa ku sheegay in uusan jirinogolaansho uu bixiyay oo tallaabo looga qaadayo Danjire Madeira, isagoo tilmaamay in aysan jirin warbixin ay soo gudbisay Wasaaradda Arimaha Dibadda oo tilmaamaysa inuu ku kacay ficillo ka hor imaanaya madaxbannaanida dalka Danjiraha Midowga Afrika Francisco Madeira ee Ra’iisul Wasaare Rooble dalka ka eryay.
Rooble oo dalka ka eryay wakiilka Midowga Afrika ee Francisco Madeira
Guddiga FEIT oo soo saaray wargelin ku socoto Xildhibaanada dooran